Shirkii 12-aad ee Guddiga Wajirka ah ee Amniga oo manta magaalada Muqdisho ka furmay – Radio Daljir
Shirkii 12-aad ee Guddiga Wajirka ah ee Amniga oo manta magaalada Muqdisho ka furmay
Mogadishu, Mar 12 -Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay Shirkii 12-aad ee Guddiga Wadajirka Amniga oo ay wada shir-guddoominayeen Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali, Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Ambassador Augustine Mahiga iyo Ku-Xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika, Ambassador Wafula.
Shirkan Guddiga Wadajirka Amniga ayaa maanta iyo berri ka dhici doono magaalada Muqdisho oo maanta ay kulmayaan Soomaalida oo kaliya, halka lagu wado in berry ay beesha caalamka ku soo biiri doonaan. Waxaana maanta shirka goob joog ahaa wasiiro mas?uliyiinta ciidanka militariga iyo booliiska, xubno ka socday Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal-Jameeca iyo mas?uliyiin kale.
Shirka maanta ayaa waxaa khudbado ka jeediyey Ra?isul Wasaaraha Soomaaliya, Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM iyo wakiilka Midowga Afrika.
Ra?isul Wasaaraha ayaa ka codsaday ka soo qeybgalayaasha in si aad ah loo gorfeeyo arrimaha amniga, gaar ahaan baahiyaha jira ee ciidamada militariga iyo booliska oo uu sheegay in loo baahanyahay in beesha caalamku ay haqab tirto baahiyaha jira si ciidanka Soomaaliyeed uu u soo celiyo amnigii iyo kala danbeyntii. Waxuuna xusay in ciidanka si ay ula dagaalaan Al-Shabaab loo baahanyahay inay heystaan dhammaan tasiilaadkii loo baahnaa iyo in dib-u-dhiska hay?daha amniga la sii xoojiyo.
Maalinta burrito ah ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo shirkan waxaana la filayaa in warbaahinta loo soo gudbiyo go?aanada shirka iyo muhiimada lagu gorfeeyey.